Nofo kely ihany sisa no nitazona ny tendany. Ny zanany vavy avy tany amin’ny fianakaviana no nahita ny vatana mangatsiakan-dreniny, izay efa nitsirara ary nihosin-dra teo amin’ny gorodona. Io no hitan’ny mpiara-monina teny amin’ny manodidina ny fokontany Ambodihazomamy, kaomina Morafeno, distrikan’i Sambava, ny marainan’ny alahady lasa teo. Hasarotam-piaro no fantatra fa nitarika ady teo amin’ity farany sy vadiny, ka nahatonga ny habibiana nampivarahontsana. Mpivady mbola ao anatin’ny fahatanorana, manan-janaka vavy iray manodidina ny 5 taona no nifamono tamin’ny alalan’ny antsy, ny zoma hifoha sabotsy lasa teo. Nisy fikasihan-tanana teo amin’ny roa tonta ary tsy fantatra raha toa ka nandray zava-pisotro ilay rangahy na tsia, tao an-trano no nisehoan’ny loza tamin’io fotoana io. Tafajanona tany amin’ny fianakaviana kosa ilay zanany, ka tsy nahita ny zava-nitranga. Izy nihikiaka sy nitomany nahita ny habibiana nampivarahontsana nihatra tamin’ny reniny no ren’ny manodidina. Tokony ho tamin’ny 6 ora maraina ny mpitandro filaminana no naharay antso mahakasika ny fahitana ny razana. Tonga nijery ny zava-nisy teny an-toerana izy ireo ora vitsy taorian’ny fampandrenesana azy. Tamin’izany indrindra no fantatra fa efa nandositra ny lehilahy vadiny izay manodidina ny 27 taona eo ho eo, ka tsy misy afa-tsy izy ihany no voampanga ho nahavanona ny loza. Tsy voakitika ny entana tao an-trano fa dia ny hanapitra ny ain’ity farany no nokendrena, rehefa nisy tsy nifanarahana. Tsy nahavita niantso vonjy ilay ramatoa raha ny nambaran’ny olona mpifanolo-bodirindrina taminy, ary tsy nisy nahare ny zava-nitranga ny olona teo amin’ny manodidina noho ny andro alina. Efa eo am-pelatanan’ny zandary ny raharaha, ary karohina ilay nahavanona ny loza. Valérie R. L’article Hasarotam-piaro tafahoatra : Notapahiny ny loham-badiny est apparu en premier sur .L’article Hasarotam-piaro tafahoatra : Notapahiny ny loham-badiny a été récupéré chez Triatra.
“Be loatra ny elanelana eo amin’ny tanàn-dehibe sy ny any ambanivohitra. Tsy hay mizara ny harim-pirenena, tsy mitovy ny Malagasy. Vao mainka mihamahantra ny any ambanivohitra: tsy misy toeram-pitsaboana, tsy misy sekoly, tsy misy lalana, tsy misy herinaratra, tsy misy fandriampahalemana … Betsaka ny tsy miasa hita amin’ny tanàn-dehibe sy hita any ambanivohitra”. Ireo ny fanamarihana nataon-dRajaonson Huges, nanazava momba ny fihariana na “économie” (conjuncture no toekarena), nandritra ny famelabelaran-kevitra momba ny “Fampihavanana sy fanarenana ny firenena”, omaly, tao amin’ny Centre sociale Arupe, Faravohitra.“Sarotra ny mampandroso an’i Madagasikara satria tsy mitady afa-tsy vola ny mpitondra mifandimby. Mahomby eo amin’ny fitondrana izay hoe mahay mifampiraharaha amin’ny mpamatsy vola. Tsy misy mihevitra izay drafitra mifanaraka amin’ny kolontsaina malagasy hampandrosoana ny fihariana”, hoy Rajaonson Hugues. Mitaky saina amam-panahy anefa ny fampandrosoana, raha ny fanazavan’ny nanao famelabelaran-kevitra hatrany, izay tsy tokony hiverenan-dalana fa mifamatotra amin’ny kolontsaina. “Maro ny fototry ny fahantrana ka ny politika avy amin’ny Banky iraisam-pirenena na ny FMI no ampiharina eto izay tsy mifanaraka amin’ny fihariana malagasy”, hoy Rajaonson Hugues.“Tsy mijery ny maha olona ny politika eto amintsika, very hasina ny kolontsaina maha Malagasy, voalohany amin’izany ny fihavanana”, hoy ny Pr Ratrema William. Raha tsy mipetraka ny fahamarinana, tsy misy ny fifampitokisana ary very ny fihavanana. Jamban’ny vola ny maro noho ny fahantrana ka manjavona ilay hoe “Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsy tsikalakalam-pihavanana”. Hevitra saika itovian’ny rehetra nandray anjara tamin’ny fihaonana izany. Mampitovy ny rehetra ny fahamarinana, mampitoetra ny fihavanana ka mampandroso ny fihariana. R.MathieuL’article « Fampihavanana sy fanarenana ny firenena »: “Tsy mifanaraka amin’ny kolontsaina ny fihariana” a été récupéré chez Newsmada.